Taxaddarrada ku rakibidda jaranjarooyinka bir -birta ah - Shiinaha Foshan Hermes Steel
Goynta Laser CNC
Xaashida Xaashida Xaashida Muraayadda
Burqaday Xaashida Birta ahama
Xaashida Xaashida Birta ah ee Bir Dahaarka ah
No.4 Xaashida Birta ahama
Iskutallaab Xaashida Xaashida Xaraashka ee Qalabka Nalalka ah
Xaashida Dahaarka Midabka PVD ahama
Xaashida Bir Dahaarka Ah
Xaashid shaabadaysan oo ahama bir ah
Taxaddarrada rakibidda jaranjarooyinka birta ah
Jaranjarooyinka birta ah ee aan biraha lahayn ayaa caan ku ah gudaha iyo dibaddaba, sidoo kale waa mid ka mid ah jaranjarooyinka ugu badan. Maxay tahay inaan fiiro gaar ah siino markaan ku rakibaynayno jaranjarooyinka birta ka samaysan?
1. Taxaddarrada rakibidda ulo jaranjarada ka samaysan ee birta ah
1. Rakibidda biraha tareenka waa in loo fuliyaa si waafaqsan shuruudaha iyo sida ay u kala horreeyaan khadkii khadku xagga sare laga bilaabo.
2. Ulaha labada daraf ee madal ee bilowga jaranjarada waa in marka hore la rakibaa, rakibintana waa in la xiraa.
3. Inta lagu jiro dhismaha alxanka, usha alxanka waa in laga sameeyaa wax la mid ah maaddada aasaasiga ah. Inta lagu jiro rakibidda, tiirka iyo qaybta gundhigga ah waa in si ku -meel -gaar ah loogu hagaajiyaa alxanka barta. Kordhinta iyo toosinta toosan ka dib, alxanka waa inuu ahaadaa mid adag.
4. Marka boolal loo adeegsado isku -xidhka, godadka ku yaal saxanka birta ee ku yaal baalka hoostiisa waa in lagu farsameeyaa godad wareegsan si looga hortago in booladaha ballaarintu aanay la jaanqaadin boosaskooda. Isbeddel yar ayaa la samayn karaa inta la rakibayo. Inta dhismuhu socdo, isticmaal layliga korontada si aad u qoddid booladaha ballaarinta ee saldhigga baallaha rakibidda, isku xidh baalka oo waxoogaa hagaaji. Haddii uu jiro qalad xagga sare u qaadidda rakibidda, ku hagaaji jaakad dhuuban oo bir ah. Ka dib hagaajinta toosan iyo sareynta, adkee boolal. dabool.
5. Ka dib markaad ku dhejisid baalasha labada daraf, isticmaal hab isku mid ah si aad u rakibto baallaha haray adigoo jiidaya fiilada.
6. Rakibaadda tiirku waa inuu ahaadaa mid adag oo aan dabacsanayn.
7. Alxanka cirifka iyo qaybaha isku xirka waa in lagu daaweeyaa ka hortagga daxalka iyo ka hortagga miridhku marka la rakibo kadib.
Midda labaad, habka rakibidda ee gacan -ka -qabashada jaranjarada birta ah
1. Rakibaadda gacmo -gashi birta ka samaysan
Rakibaadda qaybaha la dhexgeliyey (qaybo gadaal-gashaday) jaranjarada jaranjarada qaybaha la dhexgeliyey waxay qaadan kartaa oo keliya qaybo gadaal-gundhig ah. Habka ayaa ah in la isticmaalo boolal ballaarinta iyo taargooyinka birta si loo sameeyo isku xirayaasha dib loo rakibay. Marka hore xariiqda saar saldhigga dhismaha madaniga ah oo go'aami tiirka Tixgeli meesha dhibicda, ka dibna dalool dhulka jaranjarada ku qod qoditaan saamayn leh, ka dibna rakib boolal ballaarinta. Muraayaduhu waxay hayaan dherer ku filan. Ka dib marka boorarka meel la dhigo, adkee boogaha oo ku xidh lowska iyo suunka si aad uga hortagto in lowska iyo saxanka birtu ay dabcaan. Xidhiidhka ka dhexeeya curyaaminta iyo dusha derbiga ayaa isna qaata habka kor ku xusan.
Joojinta sababta oo ah kor-ku-sheegga dhismaha dib-u-galku wuxuu sababi karaa khaladaad. Sidaa darteed, ka hor intaan tiirarka la rakibin, waa in laynka mar kale la dhigaa si loo go'aamiyo saxnaanta booska saxan ee la aasay iyo tiirka toosan ee alxanka leh. Haddii leexasho jirto, waa in la saxo waqtiga. Waa in la hubiyaa in dhammaan tiirarka birta biraha ahi ay ku dul fadhiyaan taargooyinka birta oo lagu dhex wareejin karo.
3. Garabka gacantu wuxuu ku xiran yahay tiirka
Ka hor inta aan la rakibin gacan -ku -haynta iyo tiirka isku xira tiirka, xarriiqda waxaa lagu dhejiyaa xariiq dheer, oo jeexitaan ayaa lagu farsameeyaa dhammaadka sare iyadoo loo eegayo xaglaha u janjeera jaranjarada iyo wareegsan ee curyaaminta la isticmaalay. Ka dibna si toos ah gacanta u geli godadka tiirka, oo ku rakib adigoo alxanka ku haya hal gees ilaa kan kale. Gacan -ku -xigayaasha si sax ah ayaa loo rakibay oo kala -goysyadu waa ay adag yihiin. Ka dib markii tuubooyinka birta ah ee ku dhow la jaro, kala -goysyada waxaa lagu xardhay electrodes bir -bir ah. Kahor alxanka, wasakhda saliidda, burrs, dhibco miridhku, iwm. Inta u dhexaysa 30-50mm dhinac kasta oo alxanka waa in laga saaraa.
Saddex, shiidi iyo nadiifin
Ka dib marka toosinta iyo cuskantu dhammaantood alxamaan, isticmaal mashiinka wax lagu shiidi karo oo la qaadan karo si aad u hagaajisid alxanka ilaa alxanka aan la arki karin. Markaad nadiifinaysid, isticmaal giraangirta shiidida flannel ama aad dareento inaad xoqdo, oo isticmaal dhejiska dhajiska u dhigma isku mar, ilaa ay asal ahaan la mid tahay maaddada saldhigga ah ee ku dhow, iyo tolidda alxanka ma cadda.
4. Ka dib marka xusulka la rakibo, labada daraf ee garabka tooska ah iyo labada daraf ee usha toosan ayaa si ku meel gaar ah loogu hagaajiyaa alxanka barta.
Waqtiga dhejinta: Sep-02-2021
La xiriir Us